Talo: sida looga fogaado dhibaato caruurta ka qabsata ku hadalka labo luuqadood. | Somaliska
Luuqada / Talooyinka Nolosha
Sida aan ognahay caruur badan oo soomaliyeed ayaan awoodi karin in ay ku hadlaan luuqadoodii hooyo, ayagoo aad ugu dhawaada luuqada Iswiidhishka, waloow ay fiicantahay in caruurtaadu ay bartaan luuqada dalka ay ku nool yihiin, ayay sidoo kalena aad muhiim u tahay in aan la iloobin luuqadii hooyo. Gabadha lagu magacaabo Eva-Kristina Salameh oo ku takhasustay luuqadaha iyo hadalka ayaa bixineysa talo ku aadan sida la isugu dheeli tiro labada luuqadood. 1. Dhexgali ilmahaaga labada luuqadood si is le'eg hadalka iyo qoraalkaba. 2. Haddii ilmahaagu ay iskuul ka dhigtaan labada luuqadood mid ka mid ah isku day in aad la xiirisid ilmaha ay wax la bartaan si ay muraajoco ula sameeyaan. 3. Ku dhiiri gali ilmahaaga in uu qoro kuna hadlo labada luuqadood, haku deyn casharka iskuulka oo kaliya. 4. Barashada labo luuqadood dhibaato ma ahan haddii ilmuhu uu haysto fursad is le'eg oo labada luuqadood ah. 5. Dhibaatada barashada labada luuqadood waxay dhalataa markii hal luuqad ay ku badato ilmaha. 6. Haddii ilmahaagu ay dhigtaan iskuul Iswiidhish ay , waxaa haboon sidoo kale in aad ka qortid iskuul lagu barto luuqadii hooyo. Waa talo muhiim ah, waxaan rajeynaynaa in waalidiinta soomaaliyeed ay qaadan doonaan oo ay ku dhaqmi doonaan.
Talo: sida looga fogaado dhibaato caruurta ka qabsata ku hadalka labo luuqadood.
Sida aan ognahay caruur badan oo soomaliyeed ayaan awoodi karin in ay ku hadlaan luuqadoodii hooyo, ayagoo aad ugu dhawaada luuqada Iswiidhishka, waloow ay fiicantahay in caruurtaadu ay bartaan luuqada dalka ay ku nool yihiin, ayay sidoo kalena aad muhiim u tahay in aan la iloobin luuqadii hooyo.
Gabadha lagu magacaabo Eva-Kristina Salameh oo ku takhasustay luuqadaha iyo hadalka ayaa bixineysa talo ku aadan sida la isugu dheeli tiro labada luuqadood.
1. Dhexgali ilmahaaga labada luuqadood si is le’eg hadalka iyo qoraalkaba.
2. Haddii ilmahaagu ay iskuul ka dhigtaan labada luuqadood mid ka mid ah isku day in aad la xiirisid ilmaha ay wax la bartaan si ay muraajoco ula sameeyaan.
3. Ku dhiiri gali ilmahaaga in uu qoro kuna hadlo labada luuqadood, haku deyn casharka iskuulka oo kaliya.
4. Barashada labo luuqadood dhibaato ma ahan haddii ilmuhu uu haysto fursad is le’eg oo labada luuqadood ah.
5. Dhibaatada barashada labada luuqadood waxay dhalataa markii hal luuqad ay ku badato ilmaha.
6. Haddii ilmahaagu ay dhigtaan iskuul Iswiidhish ay , waxaa haboon sidoo kale in aad ka qortid iskuul lagu barto luuqadii hooyo.
Waa talo muhiim ah, waxaan rajeynaynaa in waalidiinta soomaaliyeed ay qaadan doonaan oo ay ku dhaqmi doonaan.
Ardada dhigata SFI oo la siinayo casharo ku saabsan galmada